यस्तो देखियो नायिका केकीको लालबाबु क्रेज, हजारको नोटमा मागिन अटोग्राफ ! – An Online Entertainment News Portal
HomeEntertainmentयस्तो देखियो नायिका केकीको लालबाबु क्रेज, हजारको नोटमा मागिन अटोग्राफ !
काठमाडौं पुस, ५–
सर्वाधिक चर्चाको शिखरमा रहेका राजनीतिज्ञ लालबाबु पण्डितप्रति नेपाली नायिका केकी अधिकारीको क्रेज छताछुल्ल पोखिएको छ । भर्खरै सम्पन्न चुनाव जितेर मात्र होईन यसअघि मन्त्री हुदाका बखत गरेका कामले पण्डित सर्वाधिक चर्चामा आएका नेता हुन् । कोइराला परिवारका हस्ति शेखर कोइरालाई निर्वाचनमा पराजित गरेका कारण पनि पण्डित अहिले निकै चर्चामा छन् ।
उनी राजनीतिमा एक सेलिव्रटीका रुपमा परिचित भएका छन् । त्यस्ता राजनैतिक सेलीव्रटीका फ्यान पनि सिने क्षेत्रकी सेलिव्रटी अभिनेत्री केकी अधिकारी रहेको उनै अधिकारीले खुलासा गरेकी छिन् । अभिनेत्री अधिकारीको फेवरेट लिडरसमेत पण्डित रहेको उनले बताएकी छिन् । राज्जा रानी क्याम्पेनका लागि पूर्वी नेपालको विराटनगरमा रहेकी केकीको लालबाबु क्रेज प्रष्ट देखिएको छ ।
नेता पण्डितप्रति अभिनेत्री अधिकारीको क्रेज त्यतिबेला छताछुल्ल भयो जतिबेला पण्डितलाई देख्नासाथ केकीले हजारको नोटमा लालबाबुको अटोग्राफ लिन भ्याईन् । चर्चित नायिकाले हजारको नोटमै अटोग्राफ लिन पुगेपछि नेता पण्डितले पनि सकेसम्म केकीको सुन्दरताको बयान गर्न पछि परेनन् । उनले केकीको सौन्दर्य प्रशंसा मात्र गरेनन् लगत्तै फिल्मको गीतमा केकी र नाजिरसँग कम्मर मर्काउदै नाच्न पुगे ।
नेता पण्डितलाई राज्जा रानीले बिराटनगर १२ को स्थानीय बखरी बगैंचामा आयोजित पब्लिसिटी कार्यक्रममा मुख्य अतिथि बनाईएको थियो । उक्त कार्यक्रममा बोल्दै नेता पण्डिडतले आफू मन्त्री बनेमा फिल्मको लगानी उठाइदिने दाबी समेत गर्न भ्याए । पण्डितको निर्वाचन क्षेत्र समेत रहेको उक्त स्थानमा उनले तराईमा व्याप्त दहेज परम्पराबारे समेत बोल्न भ्याए ।
राज्जा रानी पनि दहेज अर्थात दाइजो प्रथाको कथामा बन्दै गरेको चलचित्र हो । कार्यक्रममा बोल्दै पण्डितले अब बन्ने वाम सरकारले दाइजो प्रथालाई निरुत्साहित गर्न बेहुली पक्षको परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ दिने योजना ल्याउने घोषण समेत गरे । उनले फिल्मको कथावस्तु र अभियानलाई सकारात्मक भनेर चर्चा गरे । बिराटनगरदेखि सुरु भएको राज्जा रानी क्याम्पेन बुधबार जनकपुरमा हुँदैछ । केकीसहित अभिनेता नाजिर हुसेन र भोर कम्पनीका प्रतिनिधि उक्त टोलीमा सहभागी छन् ।
पुस २१ गते रिलिज हुने फिल्मसँग मिलेर भोरले तराई र पूर्वी मधेशका जिल्लामा दाइजो र बालविवाह विरुद्ध जागरण अभियान चलाएको छ । उक्त अवसरमा नरहरि प्रेमी र सुमिना लोले स्टेज गायकी प्रस्तुत गरेका थिए । रमेश एमके पौडेल निर्माता रहेको उक्त चलचित्रमा यम थापाको निर्देशन रहेको छ ।
दिपकले प्रियंकाको पोल खोल्दा झण्डै बबाल (भिडियो सहित)